ISantaco nokuqikelela kokuphepha kwabagibeli | News24
LAST UPDATED: 2018-03-23, 12:48
ISantaco nokuqikelela kokuphepha kwabagibeli
IMBONI yezokuthutha ngamatekisi ithutha iningi labagibeli kanti futhi iningi labasebenzisa imigwaqo bayakhalaza ngendlela abashayeli bamatekisi abaziphatha ngayo uma beshayela ngale kokuthobela imithetho yemigwaqo.
Lokhu kuholele ekutheni iSantacoKZN, ekuyiyo ewumlomo wemboni, ithathe izinyathelo ezinqala ukushintsha isithombe semboni ngokulekelela umphakathi osebenzisa amatekisi kanye nabahamba ngezimoto zabo ukuthi baphephe.
Ngokwanda kwezingozi zamatekisi kwabanye kugcina sekudala umunyu ngenxa yemiphefumulo edlula emhlabeni ngenxa yamatekisi. NjengeSantacoKZN singabathuthi bomphakathi kubalulekile ukuthi sidlulise umyalezo kubashayeli besifundazwe sonkana ukuthi abaqikelele emgaqweni, bathobele imithetho yemigwaqo, baphathe kahle abagibeli bese kuthi laba abashayela amabanga amade kakhulu baphumule ngokwanele noma bathole abasizi abazoshintshana nabo endleleni. Inhlangano yobumbano losomatekisi ibone kukuhle ukuba iphume umkhankaso wokwenza isiqiniseko sokuthi abashayeli banakekela abagibeli futhi bashayela ngokucophelela ukuphephisa izimpilo zabagibeli.
Kuzokhumbuleka ukuthi kusukela uqala unyaka uze uyophela kunethimba likaHlokomela elikhona kuzozonke izifunda zakwaZulu-Natal elingama-80 elihlola amatekisi emarenki liphinde lenze nezivimbamgwaqo ukulekelela ekuqinisekiseni ukuphepha. Lolu hlelo lubhekelele ukuhlomulisa umshayeli onenhlonipho, ophatha kahle abagibeli ohlezi enika abagibeli idlebe nohlonipha amalungelo abagibeli kanye nozakwabo.
Ngakho uyanxuswa umphakathi ukuthi ubambe iqhaza ekuvoteleni umshayeli ogcina imiyalelo kanye namalungelo abagibeli, ngokuthi athumele igama elithi “Phepha” kanye nenombolo kamshayeli ku-45233 okubiza inani lika R1.
Lokhu kwenzelwa ukuqinisekisa ukuphepha kanye nokwehlisa izingozi emigaqweni esifundazweni iKwaZulu Natal. Lolu hlelo lugqugquzelwa iSantaco-KZN okuyinhlangano ebhekelela amatekisi.
Ngeminye imininingwane ungaxhumana noMnu Sifiso Shangase ku-0733 004 211.
Ramaphosa to study the merits of DA's court challenge to Zuma's legal fees
LUNCH Day 2: Morkel, Rabada have Oz on back foot
Bellville 12:46 PM
Stikland 11:54 AM
Road name: Strand Road